प्रिन्ट संस्करण - जहिल्यै जनसेवा - समाचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २८, २०७४-गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सेवा आम जनताको पहुँचमा पार्न ११ औं पटक १९ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले शुक्रबार राति १०:४५ बजे कान्तिपुरसँग भने– ‘हामी जनता र विद्यार्थीका लागि लडेका हौं, माफियाका लागि होइन । अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐन माफियाका लागि ल्याउन खोजिएको छ, हामी त्यसलाई मान्दैनौं । मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता संसद्मा छन् । उनीहरु नै कार्यदलमा पनि छन् । योभन्दा गैरप्रजातान्त्रिक कुरा अरु के होला ? संसद्मा प्रजातन्त्रकै उपहास भइरहेको छ । जनताले तिरेको करबाट तलब लिनेहरु आफ्नो घृणित स्वार्थ पूरा गर्न लागेका छन् । माफिया र गुन्डाविरूद्धको मेरो लडाइँ जारी रहनेछ ।’
९ सम्झौता, कार्यान्वयन ‘शून्य’ ›